Khiyaano Mod dhan quful | Khiyaano Free Mod
Inicio/ciyaaraha/Khiyaanada Mod dhammaan waa la furay [BILAASH]
0 638 3 daqiiqo akhri
Cayaartu waa mid ficil ah oo in badan ku tiirsan waqtiyada, hadda waa waqtigii Khiyaanada. Cayaar shaki la’aan nasiin doonta saacado badan oo xiiso leh, sidaa darteed, maanta Citeia ayaan kuu haynaa Khiyaanada moodeelka dhammaan waa loo furay si bilaash ah. Taas oo aad awoodi doontid inaad ku bilowdid ku raaxeysiga kulankaan, laakiin dhammaan howlaha la furay bilowgii. Haddii aad raadineyso mod hack ka khiyaano ah nala joog.
Waa maxay Khiyaano?
Waxay ku saabsan tahay ciyaarta cusub waxaa abuuray shirkadda 'End Game Studios' iyo midda sida muuqata u timid inay kala dhig dhigto qaybo kale sida Innaga Us. Cayaartani waxay la wadaagtaa waxyaabo badan oo la mid ah kuwa aan kor ku soo sheegnay, iyagoo had iyo jeer ku haya kala duwanaanshaha farqiga u dhexeeya sharciga. Laakiin noocyo kala duwan ayaa ah dhadhanka, sida ay yiraahdaan, waana taas sababta qaabkan cusub hack Khiyaanada waxaan kaaga tagi doonaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku bilowdo tacabirkaaga.
Khiyaano waa ciyaar ciyaartoy badan, taas oo noo ogolaaneysa inaan khadka tooska ah kula galno ilaa 12 ciyaartoy kale. Haddii aad la yaaban tahay ujeedka ciyaarta, waxaan kuu sheegi karnaa inay la mid tahay dhexdeenna. Waxay ku saabsan tahay dhammaystirka hawlo taxane ah markaad iskudayeyso inaad ogaato cidda ay yihiin khiyaanooyinka. Xaqiiqdii qaar baa u maleynaya sababta ay khiyaano ugu ciyaareyso bilaash, haddii ay horey u leeyihiin mid kale oo si fiican loo yaqaan xilligan.
Halkan ka daawo: Noocii ugu dambeeyay ee naga mid ah iyadoo wax walba la furay
Jawaabtu way fududahay, Khiyaamadu waxay leedahay astaamo qaarkood oo hubaal ku dhejin doonta muddo gaaban mid ka mid ah jagooyinka ugu sarreeya qaybta ciyaarta fiidiyowga. Haatan wax yar ayaan ku qaadan doonnaa faahfaahinta ciyaarta. Si aad u haysato fikrad cad oo ah waxa aad ka heli karto qaabkan Khiyaamada ah ee la wada furay.
Warka ka socda Khiyaanada WIXII KASTA OO AAN LA XIRIIRIN
Waxa ugu horreeya ee aan ka xusi karno ayaa ah in sawir gacmeedyadu ay yihiin wax ku habboon ciyaaraha iyo kuwa horumariya khiyaanooyinka ay ogyihiin. Xaqiiqdii waad ka warqabtaa inay tahay mid ka mid ah dhinacyada ugu badan ee lagu dhaleeceeyo cayaaraha kale ee la midka ah, taasi waa sababta marka la barbardhigo Khiyaanada Vs Us Us, qaybtan cusub waxay qaadataa abaalmarinta.
Waxay noo soo bandhigeysaa muuqaallo muuqaal cusub oo soo jiidasho leh, in kasta oo in badan oo ka mid ah aagagga ciyaarta ay aad ugu eg yihiin khariidadaha ciyaarta Innersloth, iyagu waa isku mid uun Maaddaama ciyaar noocan ah aysan u baahnayn dhinacyo muuqaal ah oo weyn. Maaddaama nolosha iyo nafta cayaarahaani ay yihiin isdhexgalka aadanaha iyo, wiil, ma Khayaamo ayaa noo siisa si habboon.
Waana mid si hufan uga mid ah riwaayadaha cusub ee ay tahay inaan ku xusno ciyaarta, waxaad awoodi doontaa inaad qorto farriimo qoraal ah oo lagu soo bandhigi doono shaashadda qaab goobooyin fikir ah. Tani waxay dhici doontaa waqtiga dhabta ah, taasi waa, maahan inaad sugto inaad kujirto waqti wadahadal ah qof walbana wuu awoodi doonaa inuu arko fariinta.
Qaabkan cusub ee dhan loo furay ee Khiyaanada waxaa abuuray Ciyaaryahan Yukii runtiina waa mid aad u wanaagsan. Waxay na siisaa dhinacyo badan oo furan oo ka dhigi doona mid kasta oo ka mid ah cayaaraha aan ciyaareyno mid aad u xiiso badan oo ka sarreeya dhammaan madaddaalada.
Waxa aan ka heli doonno qaabka DHAMMAAN UNLOCKED ee Khiyaanada
Marka hore, waa inaan dhahno in ciyaartan ay soo bandhigeyso ikhtiyaar aad ku habeyn karto dabeecadaada, laakiin waxay ka sii baxsan tahay dharka. Runtii waad ka shaqeyn kartaa astaamaha ciyaaryahan walba si aad uga tagto astaamaha aad ugu jeceshahay. Waxaad ku ciyaari kartaa muuqaalada sida timaha, wejiga, jirka, midabka, iwm.
Laakiin sida cayaaraha oo dhan, waxaa jira waxyaabo ka mid ah kuwa la beddeli karo laakiin la xannibay. Tani waxay khuseysaa aragtida aad ka soo dejisaneyso Dukaanka Playstore-ka. Laakiin qaabka khiyaanada khiyaanada ah ee aan kaaga tagi doono boostadan, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato dhammaan walxaha qaabeynta.
Ciyaartan waxaad sidoo kale ka heli kartaa suurtagalnimada inaad kula ciyaartid xayawaanka qaarna waa la bixiyaa. Laakiin leh hack khiyaano mod waxaad dooran kartaa midka aad ugu jeceshahay inuu kugula socdo mid kasta oo ka mid ah ciyaaraha aad la leedahay asxaabtaada.
Laakiin intaas oo dhami maahan, haddii aad taageere u tahay cayaaraha fiidiyowga, waxaad ogtahay inay jiraan jilayaal qaarkood oo "ku garaacaya" barnaamijyada kala duwan ee socodka. Midkoodna waa Auronplay, oo aan ku raaxeysan karno qaabkan Khiyaanada ah ee qaabka maqaarka.
Haddii aad rabto inaad ka hesho qaabkan Khiyaanada waxaan kuu daayeynaa isku xirka download iyo sidoo kale hage rakibid gudaha Holymod.
Haddii aad jeceshahay ciyaarta noocan ah oo aad rabto inaad ka warqabto warkiisa, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto kuwayaga Beesha khilaaf. Halka aad sidoo kale ka heli karto ciyaaraha kale ee moodada ah si aad ugu raaxeysan karto asxaabtaada.
Khiyaamooyinka khiyaano mod for android Khiyaano Mod oo dhan quful sida loogu ciyaaro khiyaano cusub soo dejiso khiyaano mod hacks ee Khiyaanada mod khiyaano sida loo soo dejiyo Hababka khiyaanada ciyaar khiyaano cusub Nooca ugu dambeeyay ee Khiyaanada